Qikelela ukugcina imigomo nemibandela yemboni osungula kuyo ibhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Qikelela ukugcina imigomo nemibandela yemboni osungula kuyo ibhizinisi, kuloba uNtokozo Biyela
KULE ngosi ngithanda sibheke iphutha abanye abantu abalenzayo uma bengena ebhizinisini. Leli phutha yiphutha lokuthi umuntu angayibhekisisi imigomo ehambisana nebhizinisi afuna ukuliqala.
Isikhathi esiningi abantu banezifiso eziningi nezinhloso ezinhle ngamabhizinisi kodwa inkinga wukuthi iningi alilwenzi ucwaningo ngezinto ezingase zibe yisihibe embonini eliyicabangayo.
Yonke imboni inemigomo nemibandela okumele ilandelwe. Awukwazi nje ukuvele uvule ibhizinisi ngaphandle kokubhekisisa noma ukuqaphela loku. Wubudedengu lobo. Bukubeka engcupheni yokuthi kungenzeka uthi usuliqalile ibhizinisi lakho, lihamba kahle, bese kuba nesimo esiphoqa ukuthi ulivale.
Isibonelo nje kungaba yilayisensi okufanele ube nayo ukuze ukwazi ukusebenza noma amaphepha athile okumele uwagcwalise ukuze ukwazi ukuhweba ngendlela efanele. Loku kuba yisihibe emabhizinisini amaningi. Yingakho kufanele ulandele yonke imigudu ehambisana nemboni yakho ukuze ungazitholi usuba nenkinga ekusimamiseni ibhizinisi lakho.
Kuleli sonto sike seluleka intokazi evule ibhizinisi lokubheka izingane. Yebo, lihle kakhulu futhi yibhizinisi elingajwayelekile. Okuhle wukuthi ubone intuba enhle yokuza nesisombululo enkingeni abanye abantu abanayo. Iningi lentsha enezingane alinaso isikhathi sokugada izingane ngoba enye iphuthuma ubumnandi, enye isafunda kanti enye iyasebenza.
Ngakho uthola sekunezingane ezinganakiwe, kokunye abazali bazo bazishiya kogogo noma zodwa emakhaya. Lobu wubudedengu obungemukelekile emphakathini. Yilapho intokazi ibone khona ithuba elihle lokuqala ibhizinisi lokugada izingane zabangenasikhathi sazo noma abaphuma ngezikhathi ezingavumi emsebenzini.
Uvule ikhaya lakhe, wemukela izingane kusukela kwezinezinyanga zizelwe kuya kwezineminyaka emine.
Ibhizinisi liyakhula. Kodwa-ke kukhona into engayinakile intokazi; kunemithetho ehambisana nokugada izingane. Loku kwenzelwa ukuthi kwayena mnikazi webhizinisi osebenza ngezingane avikeleke ezintweni ezingase zimfake obishini, ikakhulukazi uma abanye sebebona intuba yokuganga ngezingane besebenzisa yena.
Simeluleke ngamaphutha amaningana awenzile naye abengawanakile. Loku kuyenzeka kosomabhizinisi abaningi noma abantu abanomfutho omusha wokuqala ibhizinisi, bathi siyobona ngendlela. Kuhle naloko, akunankinga. Kodwa uma usungenile wazinza ebhizinisini kuyaphoqa ukuthi ubeke izinhlaka ezizokuvikela ekutheni ibhizinisi lingawi bhu phansi.
Ngakho-ke nawe mfundi wale ngosi ngiyakukhuthaza ukuthi uma sekufike isikhathi sokuvula ibhizinisi, kubalulekile ukwenza inhlolovo nocwaningo olunzulu mayelana nemithetho edingeka ebhizinisini ohlela ukungena kulona.
Esinye isibonelo, ngiye ngilibone leli phutha lokunganaki izinto ezithile ebantwini abathanda ukungena emkhakheni wokuba negaraji likaphethroli. Kukhona iphutha elivame ebantwini abamnyama ikakhulukazi lokungaqondi ukuthi ibhizinisi elifana negaraji lisebenza ngokheshi, hhayi isikweletu. Manje-ke kuyadabukisa ukubona igaraji likaphethroli selivaliwe ngenxa yokuthi alisenawo amandla okuthenga uphethroli uma usudingeka.
Loku kusho ukuthi umninigaraji usuke enenkinga yokuhlela kahle imali noma kukhona abamntshontshela manje yena akwakwazi ukubona inzuzo ebhizinisi. Kuhle-ke uzazi ukuthi hlobo luni lwebhizinisi ongalumela ngoba onke amabhizinisi anemigomo nemibandela okufanele ilandelwe.
Baningi abathatha loku kancane, bagcine sebeyokhalakathela eweni. Loku kungaba wukuvala ibhizinisi okwesikhashana ngalesi sikhathi besalungisa amaphepha ebhizinisi. Okokuqala nje uma ufuna ukulungisa izinto ezifana nalezo, kufanele ubhalise ibhizinisi.
Emva kwaloko ubheke ukuthi yini enye edingekayo ukuze ukwazi ukusebenza ngokomthetho. Kwabadayisa utshwala kufanele ukuthi babenemvume ebagunyaza ukubudayisa. Kubuye kube khona nemithetho ethile eshoyo ukuthi budayiswa nini, kuphi kanjani.
Cha, bengisika elijikayo nje okwamanje ngithi angivuse wonke umuntu onesifiso sokusungula ibhizinisi.
Ngemuva kokuqokwa kukaMnu u-Unathi Kamlana ngo-Ephreli waba wukhomishana weFinancial Sector Conduct Authority (iFSCA) noNks u-Astrid Ludin njengelinye lamaphini kakhomishana, uNgqongqoshe wezeziMali uMnu u-Enoch Godongwana useqoke uNks uFarzana Badat noNks uKatherine Gibson njengamaphini kakhomishana. Lezi zikhundla ngezeminyaka emihlanu. UNks uBadat usebenza eSwitzerland, lapho ewumeluleki omkhulu wenqubo kwi-International Association for Insurance Supervisors. UNks uGibson ubeyilungu leTransitional Management Committee eFSCA kanti uke wasebenza emNyangweni wezeziMali.